Warshadaha Alaabada - Soo -saareyaasha Alaabada Shiinaha, Alaab -qeybiyeyaasha
Rivet -ka caadiga ah ee Indhoolaha ah
Rivet Indhoole Gaarka ah
Aluminium Khatimidii End Indhaha Rivet
Madaxa Flat Head Full Hexagonal Rivet Nut hordhac
Rivet Nut Countersunk Knurled Faahfaahinta Dhammaadka Furan
Madaxa CSK Madaxa Furitaanka Rivet Nut
Dhammaad Furan Madaxa Flat Madaxa Jilicsan ee Jidhka Indhoolaha Rivet Nut
Madaxa Flat Head Silsilad Rivet Nut
Hordhac Laba Jiid Jiid Gacmeed
Hordhac Qoryaha Gacanta Kaliya
Rivets Madaxa Wareegga Aluminiumka
Waxay u muuqataa jawi qallafsan, iska caabinta daxalka oo wanaagsan, wax bay'adda u fiican.
Dooro alaab aluminium oo tayo sare leh, oo leh codsiyo kala duwan.
nooca furfuran madaxa countersunk rivet indha la '
Badeecadani waxay ka samaysan tahay aluminium iyo birta birta ah ama birta. Waa mid ka hortagta daxalka iyo miridhku caddayn iyo qurux. Alaabtayada ayaa si weyn loogu adeegsadaa dhismaha, alaabta guriga, warshadaha iyo wixii la mid ah Tani waa badeecad kharash badan.
dhammaadka furan ee madaxa aluminium birta rivets indha la '
dhammaadka furan ee madaxa aluminium birta rivets indha la 'waa madaxa rivet ugu badan. Qaabka Dome -ga wuxuu bixiyaa muuqaal labisan oo radius oo buuxa marka loo eego Heerka Mareykanka. RivetKing Aluminium indhoolayaasha indha la 'ayaa dhalaalaya si loo hagaajiyo iska caabbinta oksaydhka iyo bilicda guud ee badeecada la jeexay.
Xidhitaanada Dhamaadka Is -xidhitaanka ee Xidhan
Lambarada heerka qaranka ee rivets xiran waa GB12615 iyo GB12616. Way fududahay waana degdeg in hal jiho laga hawlgalo. Waxay leedahay astaamaha xoog xiirid sare, ka-hortagga gariirka iyo cadaadiska lidka ku ah.
Rivets End Rivets Aluminum Rivet
Materil: Jidhka Aluminium/stem
Dhammaadka dushiisa: Polish/Zinc plated
La habeeyay: Rinji midab leh oo gaar ah sida shuruudaha macmiilka
Countersunk Open End Blind POP Rivets waxay dillaaci kartaa dhumuc kala duwan ama qalab kala duwan oo jilicsan oo adag. Iyagu waa xulashada koowaad ee biraha, caagagga iyo walxaha jaban.
Flange Weyn ayaa Kor U Qaaday Dhamaan Rivets -ka Birta
Flange Weyn Oo Kor U Qaaday Dhammaan Birta Pop Rivets -ku waxay leeyihiin dhaqe ka weyn koofiyadda marka loo eego heerka caadiga ah ee POP Rivets. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro laba xabbadood oo maadi ah si degdeg ah oo hufan. Flange weyn POP Rivets waa tuubbo, ka kooban koofiyad iyo mandrel; dhererka mandrel -ka ayaa la gooyaa marka la rakibo.
Indho -Qabasho Badan oo Indho -furan oo Dhameysta Dhameystirka POP Rivets
Marka ciddiyaha rivet-ka ee fara badan la jeexjeexo, xudunta ciddigu waxay jiidi doontaa dhammaadka dabada ee jirka ciddiyaha rivet-laba-durbaan ama qaab durbaan badan, waxay ku dhejisaa labada qaybood ee qaab-dhismeedka si ay u ruxdo, waxayna yareyn kartaa cadaadiska ku shaqeynaya dusha qaybaha dhismaha.
Gacan-qabasho badan oo Dhameystiran oo Dhameysta POP Rivets
Aluminium badan oo indhoole ah ayaa dabooli kara qaar ka mid ah baahida gaarka ah marka la hagaajiyo laba qaybood.
Button ahama Button Head Blive Rivet
Birta biraha aan lahayn ee Pop Blind Rivets waxay u qaybsan tahay laba qaybood: qolofka iyo udub -dhexaadka. Nooca rogistu wuxuu soo saaraa cilad caag ah, wuxuu isku dhejiyaa laba taargood, wuxuuna gartaa qaybta riveting.
Wareegga Jirka Wareegga Madaxa Rivet Nut
Waxaa si weyn loogu adeegsadaa isku -dubaridka alaabada elektaroonigga ah iyo alaabada warshadaha fudud sida baabuurta, duulista, qaboojiyaha, wiishka, beddelka, aaladda, alaabta guriga iyo qurxinta.
M4 Countersunk Head Rivet Nut
Waxay ku habboon tahay alaab qaro weyn oo adag.
123456 Xiga> >> Bogga 1 /20
Wuxi Yuke Science & Technology Co., ltd.